သင်ကာ၏ ပါဠိစာပေမှတ်စု | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သင်ကာ၏ ပါဠိစာပေမှတ်စု	Posted by mm thinker on July 23, 2008
Posted in: Research.	Tagged: Research.	(မှတ်စု ဆိုသည့်အတိုင်း အစီအစဉ်မကျ ရောက်တတ်ရာရာ ဖြစ်နေပေမည်။ စိတ်ဝင်စားသူတွေ အဖို့ အဖိုးတန်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။)
အရှင်ဓမ္မသာရနှင့် ကျနော်သင်ကာအစအဦးပြု၍ ပူးတွဲ တည်ထောင်ခဲ့ကြသော ဧဟိပဿိကော ဓမ္မဓူတ ပရောဂျက် (Ehipassiko Dhamma Dhuta Project) အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသော ပါဠိ၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာများ ရှာဖွေစုဆောင်းစဉ် ရေးမှတ်ထားသော စာရင်းမူကြမ်းဖြစ်ပါသည်။
ပိဋကတ်ကျမ်းရင်းများကို ပါဠိဘာသာမှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသူ၊ ကူညီပြန်ဆိုသူ၊ နိဒါန်း မိတ်ဆက်ရေးသူ၊ တည်းဖြတ်သူများ
T. W. Rhys Davids (လန်ဒန်ပါဠိကျမ်းစာအသင်းကို ထူထောင်သူ ဗြိတိသျှပညာရှင်)
Hermann Oldenberg (ဂျာမန်ပါဠိပညာရှင်)
I. B. Horner (အင်္ဂလန်၊ ၂၀ ရာစု၏ မဟာပါဠိပညာရှင်ဟု သတ်မှတ်ခံရသော အမျိုးသမီး)
Venerable Thumana (အရှင်သုမန)
C. A. F Rhys Davids (ပါဠိပါမောက္ခ – အင်္ဂလိပ်)
Maurice Walshe (ဒီဃနိကာယ်ကို ဘာသာပြန်သူ)
Ajahn Sumedho (အဂျန် သုမေဓာ – ထိုင်းတွင်ရဟန်းခံသော အမေရိကန်ရဟန်းတော်)
U Htin Fatt (ဦးထင်ဖတ် – စာရေးဆရာကြီးမောင်ထင်)
Myanmar Pitaka Association
Lord Chalmers (သုတ္တနိပါတ်စသည့် သုတ္တန်တရားတော်များကို ဘာသာပြန်ဆိုသူ အင်္ဂလိပ်ပညာရှင်)
Bhikkhu Nanamoli (ဘိက္ခု ဉာဏမောလိ – အင်္ဂလိပ်ရဟန်းတော်၊ ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းကို ဘာသာပြန်သည့်ဆရာတော်)
Bhikkhu Bodhi (ဘိက္ခုဗောဓိ – အမေရိကန်ရဟန်းတော်၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်၊ သံယုတ်နိကာယ်တို့ကို ဘာသာပြန်သည့်ဆရာတော်)
U Aye Maung (ဦးအေးမောင်)
U Ko Lay (ဦးကိုလေး @ ဇေယျာမောင်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဒုတိယအဓိပတိဟောင်း၊ ပိဋကလမ်းညွှန်စသည့်စာအုပ်များကို ပြုစုသူ)
U Nyi Nyi (ဦးညီညီ)
Suriyagoda Sumangala Thera (သူရိယဂေါဒ သုမင်္ဂလထေရ် – သီရိလင်္ကာရဟန်းတော်)
U Tin U ဦးတင်ဦး
U Hla Maung ဦးလှမောင်
E. M. Hare
Nyanaponika Thera (ဥာဏပုဏ္ဏိကထေရ်)
U Kyaw Khine ဦးကျော်ခိုင်
Sayadaw U Thittila ဆရာတော်ဦးသေဋ္ဌိလ
Mulapatthana Sayadaw U Narada မူလပဌာန်းဆရာတော်ဦးနာရဒ
U Thein Nyan ဦးသိန်းဥာဏ်
U Shwe Zan Aung ဦးရွှေဇံအောင်
Bamaw Sayadaw U Kumarabhivamsa ဗန်းမော်ဆရာတော်ဦးကုမာရာဘိဝံသ
U Pannyavamsa ဦးပညာဝံသ (စင်ကာပူဆရာတော်ကြီး)
U Thein Maung ဦးသိမ်းမောင်
W. D. C. Wagiswara
S. Radhakrishnan (အိန္ဒိယ)
Narada Mahathera (အရှင်နာရဒမဟာထေရ် – သီရိလင်္ကာရဟန်းတော်)
Ven. Khantipalo Thera Ven. Sumana Samaneri
Daw Mya Tin ဒေါ်မြတင်
Bhikkhu Kula Lumpur Dhamajoti (ဘိက္ခု ကွာလာလမ်ပူ ဓမ္မဇောတိ – မလေးရှားရဟန်းတော်)
Prof. Y. Karunadasa
Ven. Sri Acharya Buddharakkhita Peter Masefield
Ven. Thanissaro Bhikkhu (အရှင် သန္နိသရ ဘိက္ခု – သိရိလင်္ကာ ရဟန်းတော်)
Wapola Rahula (၀ါပိုလာ ရာဟုလာ – သီရိလင်္ကာရဟန်းတော်)
Ven. H. Saddhatissa (အရှင် အိပ်ခ်ျ၊ သဒ္ဓါတိဿ – သီရိလင်္ကာရဟန်းတော်)
H. S. Gehman
K. Sri Dhammananda (အရှင် ကေ သီရိ ဓမ္မာနန္ဒ – သိရိလင်္ကာရဟန်းတော်)
S. Dhammika (အရှင် အက်စ် ဓမ္မိက)
Dr. Rewata Dhamma (ဒေါက်တာရေ၀တဓမ္မ – ဘာမင်ဟမ်ဆရာတော်)
Dr. Silanandabhivamsa (ဒေါက်တာသီလာနန္ဒာဘိဝံသ – IBTMU ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်)
Piyadassi Thera (ပီယဒဿီထေရ်)
Lily D. Silver လိုင်လီ ဒီ ဆီလ်ဗာ
V. F. Dunaradana
Bhikkhu Ananda Kosammlayana (ဘိက္ခု အာနန္ဒာ ကောသလ္လာယန – အိန္ဒိယ)
Bhikkhu Sam Khissayana (ဘိက္ခု သံကစ္စာယန – အိန္ဒိယ)
Bhikkhu Jadisa Kassapa (ဘိက္ခု ဇာတိသ ကဿပ – အိန္ဒိယ)
Sayadaw U Ottama (ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ)
Ajhan Chaa (အဂျန်ချား – ထိုင်း)
Ananda W. P. Guruge (အနန္ဒ ဒဗလျူ၊ ပီ၊ ဂုရုကြီး)
အဋ္ဌကထာပါဠိကျမ်းများကို အင်္ဂလိပ်သာသာ ပြန်ဆိုသူ၊ အချီနိဒါန်း မိတ်ဆက်ရေးသူ၊ တည်းဖြတ်သူများ
N. A. Jayawickrama
Ven. Nyanamoli Thera (အရှင် ဥာဏမောလိထေရ်)
E. W. Burlingame
Department of Pali, Yangon University (ပါဠိဌာန ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)
U Ba Kyaw ဦးဘကျော်
I. B. Horner (အင်္ဂလန်)
Pe Maung Tin ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်
C. M. M. Shaw
C. A. F. Rhys Davids (အင်္ဂလန်)
Dr. Min Tin Mon (ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်)
← ဗုဒ္ဓပေးခဲ့သော ကတိရှိသလား	ကယန်းလူမျိုးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ →	Pages	about
Myanmar Sar	Blog Stats	254,669 License	MM Free Thinker by mm thinker is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.Based onawork at mmfreethinker.wordpress.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at https://mmfreethinker.wordpress.com/. Myanmar Knote Credit-Art House Graphic Studio, Mandalay, Myanmar. Createafree website or blog at WordPress.com.